Fiparitahan'ny valanaretina :: Tonga eny Anjanahary sy Manjakaray ny coronavirus • AoRaha
Fiparitahan’ny valanaretina Tonga eny Anjanahary sy Manjakaray ny coronavirus
Na dia any Toamasina aza no hisehoana tranga vaovao marobe amin’ny valanaretina coronavirus dia misoko mangina eto andrenivohitra ny fihanaky ny tsimok’aretina « Covid-19 ». Sambany no nahitana olona mitondra ny tsimok’aretina enyAnjanahary sy Manjakaray, araka ny tatitra ofisialy momba an’ity aretina ity, omaly.
Tao amin’ireo toerana roa ireo avokoa ny marary dimy vaovao, voatily ho mitondra ny « Covid-19 », teto andrenivohitra. Niampy iray kosa ny marary isehoana soritr’aretina mahery any Toamasina.
« Telo amby efapolo ny tranga vaovao voamarina tamin’ny fitiliana natao, omaly (Ndrl: tamin’ny alakamisy). Valo amby telopolo ireo marary vaovao any Toamasina. Dimy no avy eto Antananarivo, ka ny efatra avy ao Anjanahary ary eny Manjakaray kosa ny iray. Tafakatra valo amby efapolo sy efajato, ankehitriny, ny fitambaran’ireo olona nahitana ny tsimok’ aretina « Covid-19 » teto Madagasikara, nanomboka tamin’ny 19 marsa hatramin’ ny 21 mey 2020 », hoy ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, mpitondra teny ofisialy momba ny tarehimarika amin’ny coronavirus, omaly.
Raha tsiahivina dia teny Analamahitsy, Anatihazo Isotry, Soavimasoandro, Mahatony, Alarobia, Tsiadana, Amboditsiry, Ambolokandrina, Anosizato Atsinanana, Anosisoa Ambohimanarina, Antsobolo Ambatomaro, Zaivola Belanitra ary Ankadivoribe (Atsimondrano) no efa nisy olona nifindran’ny coronavirus teto Antananarivo. Fitiliana nataon’ny laboratoaran’ny Institut Pasteur de Madagascar (IPM) sy Charles Mérieux (CICM), afak’omaly, tamin’ireo fitiliana roa ambin’ny folo sy telonjato no nahitana an’ireo tranga vaovao ireo. Iraika ambin’ny folo sy telonjato no manaraka fitsaboana, ka ny roa amin’ireo no marary mafy. Mijanona ho roa ny isan’ny olona namoy ny ainy.
« Efa arahi-maso ny fivoaran’ny toe-pahasalaman’iretsy olona roa marary mafy any Toamasina. Niampy efatra kosa ny olona sitrana avy tao amin’ny hopitaly Befelatanana », araka ny fanampim-baovao.
Fanabeazana :: Noraisina ho mpiasam-panjakana ireo mpampianatra Fram efatra arivo
Fiarovana sy fitsaboana :: Fehezina tsikelikely ny tazomoka any Atsimo